Bọọlụ iri asaa na ise na Bọọlụ iri itoolu - GridiNew - comparatif-audio.net
Bọọlụ iri asaa na ise na Bọọlụ iri itoolu – GridiNew
Mkpịsị aka aka: Youkwesịrị ịtụgharị mkpịsị aka gịn’oge nnyefe. A dụrụ ndị na-agba aka nri aka ka ha mee sentimita abụọ ma ọ bụ atọ na ntanetị. Onye ọ bụla nwere bugharia Bowling mkpịsị aka ngwa ngwa, ị dịkwuo axis tilt nakwa dị ka Bowling bọl nke rave cost. Abụọ ndị a na-arụ ọrụ dị mkpa n’ịkwalite njikọta bọl. Ọzọkwa ị ga-anwa ịhapụ isi mkpịsị aka ahụ website t bọl ozugbo o kwere omume ịmepụta ohere maka mkpịsị aka iji mee ka ọrụ ịhapụ ọrụ dị oke mkpa.
Maka ndị na-amaghị ihe m na-ekwu, ma ọ bụ na-echeta ha, bọọlụ kwụsie ike bụ bọọlụ buru ibu. Ha nwere nha atọ na dayameta sitere na elu. Iji gbalịsie ike na nnọkọ ọzụzụ isii siri ike, họta bọọlụ onye ọ bụla nwere ahụ iru ala iji (nke ga-aga n’ekwughi). Ndị dị elu dị ka ihe dịka 5’2 ‘n’ogo kwesịrị ịtụle iji bọọlụ kwụsie ike (5 cm), 5’3’ ruo ihe dị ka 5’8 ‘kwesịrị ịhọrọ bọọlụ ndị ahụ (55cm), na onye ọ bụla karịrị 5’ 8 ″ kwesịrị iji bọọlụ buru ibu (65cm).
N’aka nke ọzọ, mgbe bọọlụ dịn’okpuru ụkwụ gị, ị kwesịrị ịkwado bọọlụ ahụ na-ehulata karịa ikpere gị ma kwadoo ụkwụ gịn’ụkwụ gị niile website Id ntụgharị gị. Enwere ike ịme un ka ị ghara ibuli elu bọọlụ”tara ezigbo akpụ”. Ogbugba di nkpa anaghi ekwe ka bọọlụ bilie ikuku nke ọma ebe ọ bụ na bọọlụ kụrụ na enweghị akpụkpọ ihu klọb.
Dị ka onye klas nke ise, ụlọ akwụkwọ m nwere iwu na m ga-eyi akụrụngwa maliten’isi ruon’ụkwụ. Dị ka goofy dị ka nke ahụ nwere ike ịdị, nke dị arọ na nwayọ mgbe m chere na ngịga, enweghị m ụjọ maka bọl. Nke ahụ bụ ebe ọ bụ na ọ nweghị mpaghara na nke m echedoghị. Nke a kwere ka m mee bụ ilekwasị anya naanị n’ịgba bọọlụ bọọlụ. Naanị m ga-echebara onwe gị echiche ịhụ un, t ịnweta ihe na-ele ya. Ebe a na-amụghị amị ọrụ.
Half Shower: Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume 3 Ball Shower (leen’elu), mgbe ahụ, aghụghọ a kwesịrị ịdị mfe karịa otu oge ị ga-enwe nkasi obi t 4 bọl. Nwere ike ịmalite website t ịkwanye ụkpụrụ a synchronously (ịtụba bọln’aka ọ bụlan’otu oge). Họrọ uzo ozo gafere bọọlụ ịbanye, n’otu oge tụba bọọlụ dị elu ka ọ dịkarịa ala aka, ma tụfuo bọọlụ dị ala n’akụkụ aka ya. Mgbe bọọlụ abụọ ahụ dị elu (nke kwesịrị ịbụ otu oge – chọrọ obere ọrụ), wee tụfuo bọọlụ abụọ na-esote n’otu ụzọ ahụ (aka tụbara nnukwu bọọlụ, tụba bọọlụ ọzọ dị elu wdg). Na-aga, ma na-eme aghụghọ that an’akụkụ abụọ!
Ugboro abụọ Walk Walk Drill: Iguzon’otu akụkụ nke ụlọikpe iwu na bọl na aka, jee ije na njedebe ọzọ na basketball basketball website na dribbling otu bọl na mbụ na nke ọzọ. Cheta na ijigide oge dị mma ebe bọọlụ si n’aka ekpe kụrụ n’ala, bọọlụ aka nri ya tọhapụrụ. Ka ị na – emeziwanye nka a, 100 percent ga – ga aga ngwa ngwa ma ọ bụ ọzọ agba ọsọ ọsọ.
เดี่ยว แม่น ๆ Nke ahụ kwuru na omume tụlere ebe that a bụ ụfọdụ pụtara elu otú mmadụ nwere saịtị na-eme nchọgharị ị nwere ike ị nwere ike. ihe omumu nke isometric na ala iji wulie ike tupu imalite ihe omuma ndi ahu.
Ndị a bụ mmega ahụ mmega bọọlụ ab iji nweta ngwugwu isii ha dị mma. Mana cheta, iji gosipụta ihe ngwugwu 6 ị dọkapụrụ adọka ị tinyela obi ike d e ọzụzụ ọzụzụ oge na mgbakwunye ezigbo nri iji wụfu oke abụba ma mepụta ahụ dị nro. Worrụ ọrụ ndị a ị kwesịrị iji gbanwere usoro ọzụzụ nke na-eji itukwu aka ma ọ bụ ala crunch.